ikhaya » iindaba » I-TMD ibonisa ukulawulwa kweempahla ze-asethi kunye nezisombululo ze-workflow kwi-IBC2017
I-TMD ibonisa ukulawulwa kweempahla ze-asethi kunye nezisombululo ze-workflow kwi-IBC2017
I-IBC 2017, i-15-19 Septemba, Yima 2.B49: TMD, umniki okhokelayo we-media management assets kunye neenkqubo zokuhamba kwemisebenzi ye-digital and physical assets, egxininisa kwizixazululo ezinamandla, ezisefu kwi-IBC2017. Inkampani iya kubonisa iqonga layo le-Mediaflex-UMS eliyi-Agile kunye nekhono layo lokubonelela ngeenkqubo ezijoliswe kuzo, ukulungiswa ngokukhawuleza okunokungena kwiinkampani ezincinci ukuya kwiinkampu zoshishino. Iinkqubo zinokusetyenziswa ngaphakathi kwindlu okanye zihanjiswe kwilifu, njengesofthiwe njengenkonzo (SaaS) okanye iqonga njengenkonzo (PaaS).
Imiboniso iya kubandakanya i-OnPoint, kunye nokusebenza okujoliswe kwiimfuno ezithile zokuphathwa kwee-asset. Inguqu yakutshanje ye-OnPoint ibandakanya ukuhlanganiswa okufutshane kunye AvidIinkqubo ze-® kunye ne-Adobe®, kwakunye neenkqubo zokungena kunye nokuvunywa okuphuculweyo. Njengazo zonke iinkqubo zokuphunyezwa kweMediaflex-UMS, yinto engumthonyama welizwe kwaye ingasetyenziselwa isiseko, efwini okanye kwi-hybrid.
Umngeni obalulekileyo ekuphunyezeni ukuphathwa kweempahla kuyimfuneko yokubandakanya bonke abasebenzisi ngaphandle kokulayishwa kwengcaciso. I-Chameleon yinkqubo yokulawula i-digital assets ye-digital eyenzelwe ukuvumela abasebenzi kulo lonke umbutho ukuba bafune umxholo, uqhotyoshelweyo kunye nokuphakamisa imiyalelo yomsebenzi kwi-media, ngokukhawuleza kwaye ngokukhawuleza.
Ulawulo lwe-Asset luyimfuno ekhulayo kuzo zonke iinkampani zenkqubela, ngokukodwa njengoko sihamba kwixesha elichanekileyo nelifu, "kusho uCarlton Smith, CEO we-TMD. "Abanye abasebenzisi kufuneka bafumane isisombululo ngokukhawuleza; Abanye bafuna ukucwangcisa ngokucophelela ukusebenza kwabo kwinkqubo. Amandla ayingqayizivele eMediaflex-UMS kukuba abasebenzisi banokuqala ukuncinci nokukhulisa i-aseset management their incrementally, njengoko iimfuno zabo zikhula.
"Siyaqonda ukuba wonke umsebenzisi ufuna ukufikelela kumxholo kuyo yonke intlangano yakhe, uqonde ukuba umxholo uphambuka njani, kwaye apho kuvela khona iingqungquthela kunye nokuxabana," kusho uSmith. "I-dashboard yethu enamandla i-dashboard ingabandakanywa kuyo nayiphi na inkqubo, ukubonelela ngethuba lokwenene lwe-KPIs yenkqubo, ukunika abasebenzisi ingqiqo nokulawula okungapheliyo."
Inkqubo yokuhlaziya i-TMD igcina indlela ephicothoweyo yokuphicotha yonke into eyenziwa yinkqubo. Le ngcaciso ingafomathiweyo kwiingxelo ezenziwe ngokwezifiso ukubonisa ukuhamba kwamanzi, ukufumana izixhobo ezinokubakho, nokuchonga ukusetyenziswa ngendlela esebenzayo kwezobuchwepheshe, ezezimali kunye noluntu.
I-Mediaflex-UMS iquka injini enamandla yokusebenza, inika abasebenzisi amandla okudala nokuguqula i-workflows endlini. I-drag drag elula kunye ne-interface yomsebenzisi icwangcisa imfuno yezakhono zeprogram yezobuchwepheshe ezifunwa ngabanye abathengi bekhnoloji, ukuqinisekisa ukuba abasebenzisi banokulungelelanisa iifoworks kwiimfuno zabo ezichanekileyo, ngokukhawuleza kunye neendleko ezichanekileyo. Umsebenzi omtsha wokusebenza ungadalwa ngamaminithi angaphakathi kwindlu, okanye uhlelwe ngelixa beqhuba, ukunika amabhizinisi abezindaba ubungqina obungakaze bube nokuphendula kwimingeni yemarike namathuba.
I-OnPoint, i-Chameleon, iDashboard yeDashboard kunye nayo yonke iteknoloji ekhoyo njengenxalenye ye-TMD Mediaflex-UMS imo iya kuboniswa kwi-2.B59 kwi-IBC2017.
Ii-IDS ezivela kwi-IPE ngokukhawuleza yamkelwa yi-CNN - Julayi 10, 2018
I-Cinegy TV Pack iqhuba ukufikelela kunye ne-AMI Canada - Juni 25, 2018
UPresteigne Uvakalisa Abakhethiweyo Babini - Juni 21, 2018
ukulawula impahla lonwabu Izisombululo zefu IBC IBC 2017 ukudityaniswa MAM Mediaflex-UMS OnPoint TMD ndiphila	2017-07-12
Previous: #NewTekInc: Ukutshabalalisa i-Video yeVideos ye-NA!
next: I-Soliton Systems ivakalisa ukungena eMzantsi Afrika kwiMediatech Africa 2017 ngokusebenzisa ubambiswano beJasco
I-NAB Education Foundation ukuhlonipha i-Cisco kunye ne-Corporate Leadership Award
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso: "I-TMD ibonisa ukuphathwa kweefayili zendalo kunye nezisombululo ze-workflow kwi-IBC2017". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/tmd-shows-cloud-native-asset-management-and-workflow-solutions-at-ibc2017/. Enkosi.